अमेरिकामा किन हुन्छ बारम्बार अन्धाधुन्ध गोलीकाण्ड ? « Drishti News – Nepalese News Portal
अमेरिकामा किन हुन्छ बारम्बार अन्धाधुन्ध गोलीकाण्ड ?
१५ भाद्र २०७६, आइतबार 2:13 pm
ह्युस्टन, १५ भदौ (सिन्ह्वा) । अमेरिकामा फेरि अर्को गोलीकाण्ड भएको छ । शबिनार भएको उक्त घटनामा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने २१ जना घाइते भएका छन् ।
घटनामा संलग्न श्वेतवर्णका झण्डै ३५ वर्षे बन्दुकधारीमाथि प्रहरीले चलाएको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । तर बन्दुकधारीको नाम भने प्रहरीले खुलाएको छैन । ‘टेक्सासको सार्वजनिक सुरक्षा विभागनजिकै सुरक्षाकर्मीहरुले एउटा होण्डा कार रोक्न खोज्दा प्रहरीमाथि गोली चलाएर भागेको थियो । त्यसपछि ती व्यक्तिले हुलाक सेवाको ट्रक अपहरण गरेर बाटोमा मानिसलाई गोली चलाउँदै हिँडेको थियो’ ओडिसाका प्रहरी प्रमुख मिचेल गर्कले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।
आक्रमणकारीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले पनि बताएका छन् । ‘घटनापछि धेरै पीडित भएका छन्’ गर्कले भने । घटनामा परी घाइते भएका मध्ये तीन जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै घटनामा बारेमा आफूलाई महान्यायाधिवक्ताले जानकारी गराउनु भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सुरक्षाकर्मी र अनुसन्धानकर्ताहरुलाई पूर्ण रुपमा परिचालन गरिएको पनि बताए । टेक्सासका गभर्नर जर्ज अब्बेटले एक वक्तव्य जारी गर्दै क्रुर र विवेकहीन घटनाबाट आफू र आफ्नी श्रीमती अत्यन्त दुःखित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
गत अगस्ट ३ मा टेक्सासको एल पासोमा भएको यस्तै गोलीकाण्डमा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । अमेरिका यस्ता गोलीकाण्ड बारम्बार हुँदै आएको छ । तर, किन र केका लागि यस्तो गोलीकाण्ड भइरहन्छ भन्ने विषयले अमेरिका टाउको दुखाइ बनेको छ । एक वर्षको अन्तरालमा मात्र गोलीकाण्डबाट यहाँ सयौँले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् ।